Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wtn » Horumarinta Hoggaaminta Kooxda wakhtiyada aan la hubin
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wtn
Dhammaan dhinacyada socdaalka iyo dalxiiska, ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo kuwa guudba, waxay ogaadeen in suuqa aan xasilloonayn ee maanta; bulshooyinka iyo xataa ummadaha oo dhami waxay u baahan yihiin inay ka wada shaqeeyaan danta guud.
Dr. Peter Tarlow, madaxa Shabakadda Dalxiiska Adduunka, ahna aasaasaha Dalxiiska Titbits ayaa sheekadan muhiimka ah ka qoray hoggaanka kooxda waqtiyada COVID-19.
Inta badan khubarada dalxiisku waxay ka hadlaan "shirkadaha iyo hogaaminta kooxda", laakiin nasiib daro waxa qaar badan oo iyaga ka mid ahi ay dhab ahaantii ula jeedaan weedhaas: "Aan aragno waxaad ii qaban karto."
Dalxiiska udub dhexaad u ah wakaalad, si kastaba ha ahaatee, xiligan xiisadaha cimilada la xiriira, dagaalada, kacdoonada siyaasadeed iyo masiibooyinka ayaa noqda kuwa aad iyo aad u adag in si guul leh loo maareeyo.
Bulshooyinka iyo xitaa ummadaha oo dhan waxay u baahan yihiin inay ka wada shaqeeyaan danta guud.
Si lagaaga caawiyo inaad gaadho heerkan suuq-geyneed iskaashi iyo guul, tixgeli qaar ka mid ah fikradaha soo socda:
U arag asxaabtaada inay siman yihiin halkii aad ahaan lahayd dad aad u baahan tahay inaad u dulqaadato. Marar badan waxaan u jeednaa in aan aragno asxaabta dalxiiska iyada oo loo marayo mudnaanta ganacsigeenna. Ma jiro hal ganacsi oo dalxiis ah; balse safarka iyo dalxiisku waa nidaam nololeed oo ka kooban qaybo kala duwan oo nool kuwaas oo si aad ah u wada shaqeeya si la mid ah qaabka jidhka bini'aadamka. Haddii qayb ka mid ah ay ku guuldareysato, nidaamka oo dhan ayaa mas'uul ka ah inuu dareemo saameynta.
Horumarinta is-ixtiraamka iyo is-aaminka. Waa lama huraan in uu jiro yool dalxiis oo guud kaas oo ku socda nidaamka isku mid ah. Inkasta oo dadka kala duwani ay leeyihiin xirfado iyo heerar karti oo kala duwan, gunta hoose ayaa ah in yoolku gaaro qof walba shaqadiisa. Saraakiisha Dalxiiska waa in ay xasuustaan ​​in ay ku jiraan xaalad xirfadeed, aysan u baahnayn in ay noqdaan saaxiibadooda gaarka ah, laakiin waxay u baahan yihiin inay horumariyaan xiriir shaqo oo wanaagsan.
Ha ka baqin inaad raacdo calooshaada. Waxaa jira waqtiyo marka si kasta oo ay u muuqato xogtu inay dhahdo mindhicirkaagu wuxuu kuu sheegayaa in kani aanu ahayn go'aanka saxda ah. Inta badan garaadka ayaa door muhiim ah ka ciyaari kara go'aan qaadashada. In kasta oo aynaan weligeen doonayn in aan iska indho-tirno xogta, sidoo kale ha illoobin dareenkaaga mindhicirka.
Isku day inaad horumariso khibradaha caadiga ah adiga oo waqti la qaadanaya asxaabtaada. Inta badan, waxaan dadka kale u xukunnaa si khaldan sababtoo ah waxaan u qaadannaa inaan fahamnay ganacsiga qofka kale. Maaha fikrad xun in agaasimayaasha CVB ay waqti yar ku qaataan ka shaqaynta huteelada, makhaayadaha, iyo meelaha soo jiidashada si ay u fahmaan marka laga eego dhinaca hore waxa caqabadaha iyo fursadaha yihiin. Si la mid ah, mulkiilayaasha hoteellada ee laga yaabo inay dhaleeceeyaan dadaalka suuqgeyneed ee magaalada ayaa laga yaabaa inay hal maalin ku qaataan CVB ama xafiiska dalxiiska si ay u bartaan sheekada gudaha ee ku saabsan suuqgeynta deegaanka oo dhan ama lidkeeda.
· In la horumariyo halgan midaysan. Si kasta oo ay ahaataba dooda gudaha ee ururkaagu, waa inay ahaadaan kuwo gudaha ah. Aad bay u burburisaa warshadaha dalxiiska marka dooda gudaha la shaaciyo ama saxafada loo gudbiyo. Waxa ka socda qolalka looxa dhexdiisa waa inay ku jiraan qolka board-ka. Bar dadka ku jira warshadaha in mas'uuliyadu ay soo saarto mas'uuliyado cusub iyo in ay aad u adag tahay (iyo xirfad badan) in laga shaqeeyo sidii koox loo wada ilaalin lahaa intii la kala gooyn lahaa.
Waxba baro. Aad meelo kale oo qoraalo qaado, dabadeed la wadaag waxa aad baratay asxaabtaada. Bulshadaadu uma baahna inay noqdaan kuwa ugu horreeya ee leh fikrad cusub, laakiin waxay u baahan yihiin inay wax ka bartaan kuwa kale ka dibna ay dhammaystiraan fikradahooda. Ka soo qaado waxyaabaha lagama maarmaanka u ah fikrad kasta ka dibna fikradaha ku habboon xaaladdaada gaarka ah.
· Samee nidaam lataliye. Dalxiiska waa goob adag oo aan dhamaanteen u baahanahay lataliyeyaal. La-taliyeyaashu waa inay ka badan yihiin macallimiinta. La-taliyeyaashu waa inay ahaadaan dad nagu qasbaya inaan aragno sawirka guud ee weyn iyo sida qayb kasta oo ka mid ah qaybaha dalxiisku isugu habboon yihiin. La-taliyeyaal wanaagsan waa inay sidoo kale u adeegaan mid kasta oo naga mid ah sidii wakiilo iskuxiran oo ina bari kara dadka ka baxsan goobaheena ganacsiga. Warshadaha halkaas oo macaamiishu ay inta badan noo sheegaan cabashooyinkooda runta ah oo aan si fudud u soo laaban, dhammaan saraakiisha dalxiisku waxay u baahan yihiin lataliyeyaal u dhaqmi kara kalsooni, dejiyeyaal rajo, hubinta xaqiiqada isla markaana ka caawiya sidii ay u heli lahaayeen habab cusub oo dhibaatooyin joogto ah iyo caqabado cusub.
Go'aanso sida aad u qoondaynayso kheyraadka qaaliga ah. Ma jiro bulsho ama waddan leh kheyraad aan xadidneyn. Marka hore samee cilmi-baarista si aad u hubiso in qoondayntaada kheyraadku macno samaynayso muddada dhow iyo muddada fog labadaba. Markaad horumarinayso qoondaynta kheyraadka, billow inaad ka fikirto sanduuqa. Tusaale ahaan, ma jiraa xidhiidh ka dhexeeya amniga iyo calaamadaynta alaabta ee 9-11 kadib? Xayeysiiska qadiimiga ah macno ma u samaynayaa suuqaaga tirakoobka ama niche? Ugu dambeyntii ha iloobin in mar walba uu jiro waqti dib u dhac ah ee dalxiiska. Taas macneheedu waxa weeye in wakhtigan ka dambeeya covid-ku aanu noqon doono mid hal abuur leh. Dhaqan ahaan, xilliyada guusha waxay ka tarjumaysaa shaqo wanaagsan oo laga soo bilaabo dhowr sano ka dib. Si la mid ah, xeebta halkii laga dhisi lahaa waxay sababi kartaa dhibaatooyin aad u weyn dhowr sano gudahood.
Noqo qof karti leh, oo waligaa ha ilaawin inaad dhoola cadayso! Isku day inaad ogaato sida siyaasaddu u soo saari karto wax ka badan hal natiijo oo wanaagsan. Ma aha oo kaliya inaan u diyaargarowno inaan dib u warshadayn ku samayno alaabtii hore, laakiin hufnaanta hal-abuurka ayaa sidoo kale laga yaabaa inay la macno tahay dib-u-warshadaynta ololihii hore ee suuqgeynta, siyaasadihii hore ama xitaa dib u warshadaynta habka aan u isticmaalno dhulka. Xasuusnoow in waqtiyadu is beddelaan oo siyaasadda laga yaabo in aan lagu guulaysan muddo gaar ah laga yaabo in ay noqoto mid aad u guulaysata xilli kale.
· Shaqaalayso dadka ugu fiican ee aad awooddo. Warshadaha dalxiisku waxay ku salaysan yihiin dadka iyo xirfadaha shakhsi ahaaneed. Ma jiro wax burburin kara warshadaha dalxiiska in ka badan dadka ka shaqeeya ee aan jeclayn dadka. In kasta oo shaqaalaha qanacsan aanay dammaanad qaadayn adeeg macaamiil oo wanaagsan, shaqaalaha xanaaqsan had iyo jeer waxay dammaanad qaadaan adeegga macaamiisha xun. Waqti u qaado si aad dadka ula dhaqanto si xushmad leh oo aad siiso tababbarka ugu fiican ee suurtogalka ah, kaliya maahan aaggooda khibradda laakiin meelaha kale ee dalxiiska sidoo kale. Marka shaqaaluhu khalad sameeyaan ha soo dirin qof ku meel gaadh ah ee waxaad edbinaysaa dadka meel sare ka soo jeeda. Xusuusnow in si kasta oo ay maamulayaasha dalxiisku u neceb yihiin edbinta dadka kale ay jiraan waqtiyo aanay jirin wax beddel ah.
Wax badan oo ku saabsan Shabakadda Dalxiiska Adduunka ee www.wtn.travel
Wax badan oo ku saabsan Titbits Dalxiiska iyo Dalxiiska iyo in ka badan: Tourismandmore.com